နောက်ဆုံးပေါ် HTC ဘဏ္Reportာရေးအစီရင်ခံစာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမျှော်လင့်ချက်ပေးသည် Androidsis
HTC က ၎င်းသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးသောအခိုက်အတန့်မှဝေးကွာခြင်းမဟုတ်ပါ။ HTC Desire or the ကဲ့သို့သောအထင်ကြီးစရာရတနာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရောင်တောက်စေသောထိုထုတ်လုပ်သူ HTC One ကို M7 စျေးထဲမှာရေနွေးငွေ့တွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
ဤအခြေအနေ၏အဓိကအမှားမှာ HTC ဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏စျေးနှုန်းမူဝါဒနှင့်ဒီဇိုင်းများဆက်လက်တည်ရှိမှုသည်ကုမ္ပဏီအားလုံး ၀ မကူညီခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်ဘဏ္financialာရေးအချက်အလက်သည် HTC အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ဖြစ်စေသော်လည်း၊ ဟုတ်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းဝင်ငွေပြန်ရတယ်။
HTC သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၆.၈ သန်းဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရရှိခဲ့သည်
Digitimes ၏အဆိုအရထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည် အပြုသဘောဝင်ငွေအတွက် $ 276,8 သန်းထမြောက်တော်မူ။ သတိထားပါ၊ ဤအချက်အလက်များသည်အတိုင်ပင်ခံတင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာတွင်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အနည်းဆုံးအားဖြင့်အာရှiantရာမစီးပွားရေးကျဆင်းလာသည့်စီးပွားရေးအခြေအနေသို့လေကြောင်းလွင့်ထွက်လာသည့်အတွက်မည်မျှအကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ဖြစ်စေယင်ကောင်အပေါ်ခေါင်းလောင်းမပစ်နိုင်ပါ။ ဒီကိန်းဂဏန်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၃.၂% ကျဆင်းသွားသည်။ အောက်တိုဘာလရောင်းအားနှင့်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာရောင်းအားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ HTC သည်အမြတ်ငွေ ၂၅.၉၂% တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဈေးနှုန်းဒေါ်လာ ၃၉၉ ဖြင့်မကြာသေးမီကထွက်ရှိခဲ့သော HTC One A9 သည်ထုတ်လုပ်သူကိုအလွန်လိုအပ်နေသောမြှင့်တင်မှုအတွက်ကူညီပေးနေပုံရသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုပြီးဆုံးချိန်နှင့်အရာဝတ္ထုမည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည် HTC One A9 ကိုဒေါ်လာ ၄၉၉ ဖြင့်ပြန်လည်ရရှိသည်။
စပိန်မှာလား။ ကောင်းပြီ၊ El Corte Inglésမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC ဖုန်းအသစ်ကိုဈေးနှုန်း ၄၉၉ ယူရိုဖြင့်ကြိုတင်မှာယူထားပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလျှော့စျေးသည်စပိန်နိုင်ငံများသို့မရောက်ရှိနိုင်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ရိုးဖွောငျ့စှာ ကျွန်ုပ်သည် HTC အပေါ်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုများစွာရှိသည်။ QTEK ဖြစ်တုန်းကသူတို့ရဲ့ PDAs တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ပြီး HTC Desire (သို့) HTC One M7 တို့လိုဖုန်းတွေကကျွန်တော့်ကိုအကြီးအကျယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ HTC သည်အချိန်မီပြန်လည်စဉ်းစားပြီးကုမ္ပဏီ၏လမ်းကြောင်းကိုဖြောင့်ဖြောင့်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကသိပ်ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူး။
HTC ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ငါဒီဇိုင်း၏ဘာသာရပ်, အခြားထုတ်လုပ်သူ၏အခြားကြီးမြတ် Achilles ဖနောင့်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်မပြုမီ, ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးရှုထောင့်ကုမ္ပဏီ၏အဓိကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းမှာ ၇၉၉ ယူရိုရှိတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ Samsung ကသူ့ရဲ့ terminal ကိုတူညီတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စတင်ရောင်းချပေမယ့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဂုဏ်သိက္ခာကိုနှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။ ဖော်ပြရန်မ Samsung Galaxy S6 Edge သည်ယခင်နှစ်များနှင့်နှိုင်းစာလျှင်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်. HTC သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းများအတွက်စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုကိုဆက်လက်မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။
ထုတ်လုပ်သူရဲ့ပြproblemနာကဒီကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းတွေကို high-end ဆိပ်ကမ်းတွေမှာတွေ့နိုင်တာပဲ။ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာထိုင်ဝမ်iantရာမထိုးဖောက်လိုသည့်စျေးကွက်များထဲမှတစ်ခုသည်လူလတ်တန်းစားများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ HTC One A9 လိုဖုန်းတွေကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်လို့ရပေမယ့်ဈေးကြီးတဲ့ယူရို ၄၉၉ နဲ့ရောင်းချခြင်းဟာသူတို့နောက်မှာရှိခဲ့တာကိုခြစ်ရာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ယူရို ၅၀ အတွက် Honor7လိုရွေးချယ်စရာများ နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ။
HTC သည် ၄ ​​င်း၏တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုဌာနကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » HTC ၏နောက်ဆုံးဘဏ္reportာရေးအစီရင်ခံစာသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပွင့်စေသည်
Jencell လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မျှော်လင့်ပါတယ်။ နှင့်ပျံသန်းနိုင်! ငါ htc ကိုနှစ်သက်တယ်